La Guud ahaan Da 'Aftahan: Luqadaha ugu Sarreeya Calaamadaha Ogaan Blogger Dovrebbe Sapere
Weligaa ma rajeyneysay inaad heli kartid liistada dhamaan shuruudaha muhiimka ah ee blogger kasta oo ay tahay inuu ogaado? Aan wajahno, waxaa jira waxyaabo badan oo laga ogaado barashada iyo suuqgeynta internetka. In aad haysato bog si aad u tixraacdid waxay noqon kartaa mid aad u fiican.
Nasiib wanaag aad, tani waa sida caadiga ah Andrew Dyhan, khabiir ku ah Semt Adeegga Digtal wuxuu kugu sameeyay qodobkan. Waxaad ka heli doontaa liistada shuruudaha blogga ee caadiga ah ee lagu qeexay loona habeeyay habka loogu talagalay si sahlan - rehvid soodsalt ameerikasse.
AdSense: waa mawaadiic dakhliyeed oo ku saleysan dakhliyada Google. Bloggers waxay sameeyaan lacag marka ay dadku riixaan xirmooyinka AdSense ee maqaallada iyo xayeysiisyada ku shaqeeya bogagga ama blogyada.
AdWords: codsi xayeysiis ah oo Google ah oo ku saleysan, halkaas oo bloggers iyo milkiilayaasha bogagga lagu bixiyo lacag riix erayga muhiimka ah.
Alexa: waa qalabka darajada bogga Amazon. Waxay calaamadeysaa bogagga internetka waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ogaato midka ugu badan gaadiidka. Lambar ayaa loo qoondeeyey website kasta oo ku salaysan xogta la ururiyey. Hoosudhaca hoose, ayaa bogga intarnetka ah.
Backlinks: waa qalab lagu ogaado qoraallada blogka iyo shabakadaha internetka ee ku xiran bogagga internetka. Google wuxuu adeegsadaa dib u eegis si uu uga caawiyo u sarreeyo bogagga shabakadda.
Blackhat Search Engine Optimisation: farsamooyinka aan sirta ahayn ayaa si aan caddaalad ahayn ugu shaqeynaya si loo kordhiyo darajada webka. Tani waxaa ka mid ah in lagu foogan yahay farsamooyinka sida sheekooyinka muhiimka ah ee loo isticmaalo qoraalka iyo isticmaalka bogagga albaabka.
Blog: bogga si joogto ah boggiisa loo cusbooneysiiyey oo leh mawduucyo ku haboon oo la isku daro.
Domain: waa magaca martida ee website.
Feed: waa hab ay dadku u helaan wararkii ugu dambeeyay ee laga helo boggaga internetka iyo blogyada. Labada nooc ee quudinta ugu weyn waa RSS iyo Atom.
Google Analytics: Goobta Google ee bogga internetka. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho macluumaad ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee boggaaga internetka. xadiga gaadiidka soo socda ee goobtaada..
Bogga Bogga: bogga bogga ee blog ama website.
Linkbait: waa arrin soo jiidasho leh oo dadka ka dhigaya inay ku dhejiyaan boosteejo, fiidiyo, ama sawirro.
Meta tags: waa calaamadaha HTML oo muujinaya sharaxaadda bogga iyo ereyada muhiimka ah.
Niche: Mawduuc yar oo mawduuc ah oo blogger ah ayaa diiradda saaraya.
PageRank: barta internetka ama blogka lagu xisaabiyo iyadoo la adeegsanayo algorithms Google.
Permalink: cinwaanka bogga ama blog post.
Boostada: hal maqaalo oo keliya ama gelitaanka bogga ama blog.
Pro Blogger: qof dakhliga ku soo galiya internetka (blog) iyo halkan ayaa loo tixgeliyaa blogger xirfadle ah.
Search Engine Optimization (SEO): farsamooyinka loo isticmaalo in lagu kordhiyo darajooyinka bogga ah hab dabiici ah, anshax ahaan loo ansixiyey. Marka barta internetka ama blogka loogu talagalay SEO-ga waxaan dhihi karnaa in si buuxda loo fiicnaado.
Warbaahinta Bulshada: bogagga internetka ee u oggolaanaya is-dhexgalka bulshada ee u dhexeeya dadka. Kuwaas waxaa ka mid ah sahan sida Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram, Snapchat iyo kuwa kale.
Macaamiisha: dadka raba in ay iska diiwaan geliyaan boggaaga ama blog-ka si aad u hesho wargeysyada caadiga ah ama casriyeynta email ahaan.
Tags: ereyada muhiimka ah ee u sahlaysa dadka in ay ogaadaan waxa ay u baahan yihiin goobtaada.
Macluumaadka Viral: Mowduucyada caanka ah ee fiidiyoow, sawirada, ama boostada ay dad badani wadaagaan waqti gaaban.
Vlogging: isticmaalka qaabka fiidiyowga si kor loogu qaado nuxurka caadiga ah sida caadiga ah loogu akhriyo qoraalada blog.
Wordpress: hogaaminta hoggaanka ee dunida oo dhan.
WordPress Plugin: Waxaa jira dhibco isku dhafan oo xaliya dhibaatooyin kala duwan. Kalandarka kasta waa qeyb ka mid ah xeerka oo lagu gali karo blogkaaga ama boggaaga.
URL: waa ereyo kooban oo loogu talagalay Meel Dhowr Hawleedka Mideysan. URL-yada waa isku xidhka ku geyn doona bog gaar ah oo loo arko cinwaanno loogu talagalay bogagga ama bogagga.
Liiskani ma aha mid dhamaystiran, laakiin wuxuu ku siinayaa ereyada ugu caansan ee aad ku soo baxayso iyo shuruudaha ugu muhiimsan ee blogger kasta waa inuu ogaadaa.